Qalabka IPhone | Wararka IPhone (Bogga 3)
IPhone 12 wuxuu imaan doonaa bilaa headphones iyo bilaa xeedho sida uu qabo falanqeeye
Jiilka soo socda ee iPhone-ka ayaa ku dhufan kara suuqa bilaa xeedho iyo sameecado la'aan la xidhiidha danab
OtterBox waxay soo bandhigeysaa noocyo cusub oo ah fiilooyin la qaadan karo iyo kuwa aan fiilooyinka lahayn
Kiis sameeyaha OtterBox wuxuu soo saaray noocyo cusub oo deg deg ah iyo biil wireless ah oo ku shaqeeya batariyada la qaadan karo.
Otto Q ee Moshi, naqshadeynta iyo waxtarka saldhigga lacag la'aanta ah
Waxaan tijaabinay saldhigga lacag bixinta ee Moshi ee Otto Q, oo sheegta inuu yahay saldhiga ugu dhaqsiyaha badan wireless-ka suuqa, oo leh qaabeyn wanaagsan iyo xakameynta heerkulka.
Sonos Move hadda waxaa lagu heli karaa mid cad oo leh hal saac oo dheeri ah oo ismaamul ah
Sonos waxay cusbooneysiineysaa Sonos Move iyada oo hal saac oo dheeri ah oo madax-bannaanideeda ah waxayna soo saareysaa nooc cusub oo ah midab-cad-cad si loo dhammaystiro kala-duwanayaasha ku hadla
Bomaker SiFi II, samaacado sameecado run ah oo runtii bixiya
Bomaker's TWS SiFi II sameecadaha dhagaha ayaa bixiya tayada codka layaabka leh iyo waxqabadka qiimaha hooseeya.
Midabyo cusub oo loogu talagalay kiisaska iPhone 11 iyo 11 Pro silikoon
Apple wuxuu si wadajir ah u bilaabayaa xargaha cusub ee loogu talagalay Apple Watch, midabyo cusub oo loogu talagalay kiisaska silikoon ee moodooyinka iPhone 11
Anker Nebula Capsule, waxaan falanqeyneynaa borojektar la qaadan karo
Waxaan tijaabinay Nebula Capsule, oo ah mashruuc aad u yar oo la qaadan karo oo leh 4 saacadood oo ismaamul ah, Android 7.1, dhawaq weyn iyo AirPlay oo iswaafajin kara.
Koogeek wuxuu bixiyaa inuu ilaaliyo gurigeenna
Koogeek wuxuu na siiyaa dalabyo ku saabsan alaabada guriga oo ay tahay inaanaan ka maqnaan: nalalka casriga ah, dareeraha albaabka iyo waxyaabo kale oo badan!
Hadda waxaa la heli karaa Belkin SoundForm Elite, oo ah afhayeen isku xira xeedho wireless ah
Haddii aad raadineyso afhayeen tayo leh oo aad ugu raaxeysato muusikada aad ugu jeceshahay guriga, suuqa waxaan ...
Caaradda qalinka Apple ayaa leh badhan
Afka qalinka Apple wuxuu yeelan karaa badhan. Sida jiirka oo kale, patent ayaa muujinaya caarada qalinka Apple oo leh badhan isku dhafan.
Waxaan ku tijaabinay batariga banaanka ee UGREEN 20.000 mAh iyo Power Delivery
Waxaan ku falanqeyneynaa batariga banaanka ee UGREEN oo leh awood 20.000mAh iyo awood ku shubasho ilaa 18W leh Awood ...
Xeedho cusub UGREEN 65W oo loogu talagalay dhammaan qalabkaaga
Qalabkan UGREEN wuxuu leeyahay seddex USB-C Power Delivery Power, saldhig USB-A ah iyo wadarta awood dhan 65W oo isku qiimo ah midka caadiga ah.
Istuudiyaha cusub ee AirPods waxaa lagu sameyn doonaa Vietnam laga bilaabo Juun
Istuudiyaha cusub ee AirPods waxaa lagu sameyn doonaa Vietnam laga bilaabo Juun. Waxaan horey u ogaanay cidda sameysa, goobta iyo goorta. Iyo xitaa magaca: AirPods Studio.
Koogeek wuxuu ku bixiyaa otomaatiga guriga wuu soo laabtay
Haddii aad rabto inaad bilowdo inaad guri ka dhigato, ama aad rabto inaad sii wadato, dalabyada ay bixiso Koogeek waxay noqon kartaa mid dhaqaale ahaan aad u badan.
Apple waxay bilaabi kartaa Powerbeats Pro cusub oo midabyo cusub oo geesinimo leh leh
Apple wuxuu bilaabi karaa midab cusub oo ah Powerbeats Pro, midabyo aad u qurux badan oo aad u muuqda oo lagu dari doono 4-ta hadda
Nimbus +, a Steelseries MFi kontaroolo astaamo cusub
SteelSeries waxay sii wadaysaa inay ka shaqeyso kantaroolayaasha MFi si kor loogu qaado khibradeena ciyaaraha ee alaabada Apple iyo Nimbus + ayaa ah ku daristoodii ugu dambeysay.
Sameecadaha dhagaha ee Apple waxaa loogu yeeri karaa AirPods Studio
Sameecadaha dhagaha ee Apple waxaa loogu yeeri karaa AirPods Studio. Mustaqbalka "Dhegaha Dheer" ee ka soo baxa Apple ayaa dhameystiri doona noocyada AirPods.
SteelSeries waxay leedahay darawalkeeda cusub ee Nimbus + oo diyaar u ah aaladaha Apple
SteelSeries waxay leedahay darawalkeeda cusub ee Nimbus + oo diyaar u ah aaladaha Apple. Waa Stratus Duo hadda loogu talagalay qalabka Applei ee shahaadada FMi leh.
Sonos waxay soo saareysaa ku hadlayaal cusub oo leh bar dhawaaq leh Dolby Atmos
Sonos waxay ku cusbooneysiisaa ku hadlaheeda qiimaha leh Dolby Atmos cusub oo la jaan qaada dhawaaqa, afhayeenka istuudiyaha cusub, iyo subwoofer awood badan.
Nomad wuxuu bilaabayaa midab cusub oo Kiiskiisa Rugged ee AirPods Pro
omad wuxuu ku darayaa midab cusub "maqaar dabiici ah" kiiskiisa Rugged for AirPods Pro, mid ka mid ah xulashooyinka ugu wanaagsan ee lagu ilaaliyo samaacadaha dhagaha.
Powerbeats Pro-ka cusub ayaa dhawaan bilaabmi doona
Daadinta cusub ayaa muujineysa waxa ay noqon karto cusbooneysiinta dhagaha dhagaha ee Powerbeats Pro ee shirkadda Beats
Dhibaatooyinka ku saabsan AirPods-kaaga Pro? Apple waxay ku siineysaa xalal macquul ah
Apple waxay daabacdaa dukumiinti ay ku siineyso taxane soo jeedinno ah si loo xalliyo laba dhibaato oo guud ahaan la wadaago AirPods Pro.
Apple wuxuu cusbooneysiiyaa qalabka 'AirPods Pro'
Ka dib markii la cusbooneysiiyay bishii Diseembar ee ka dhigtay joojinta buuqa ka sii daraysa, Apple wuxuu sii daayaa cusbooneysi cusub oo firmware ah oo loogu talagalay AirPods Pro.
Nanoleaf Wuxuu Bilaabayaa Aqbalaada Amarada Golayaal Cusub Oo Hexagonal ah
Ragga ka socda Nanoleaf waxay bilaabayaan inay sii xajistaan ​​xayndaabyada cusub ee laba geesoodka ah oo ay ku abuuri karaan jawiga ugu wanaagsan guryaheena.
Mujjo wuxuu soo saaray kiiska ugu fiican ee iPhone 11 Pro "habeenka cagaaran"
Mujjo wuxuu soo saaray kiiska cusub ee loo yaqaan 'Slate Green color case' ee loogu talagalay iPhone 11 Pro, oo leh maqaar qaali ah oo si dhib leh u kordhinaya dhumucda.
U rog CarPlay wireless-ka adigoo ku mahadsan CPLAY2air
CPLAY2air wuxuu kuu ogolaanayaa inaad ku beddelato taleefankaaga caadiga ah ee fiilada leh ee loo yaqaan 'CarPlay' mid ka mid ah fiilooyinka iyada oo la ilaalinayo dhammaan shaqooyinkeeda.
Mujjo waxay ku darsataa midabka cagaaran maqaarkeeda
Mujjo wuxuu midab cusub ku daraa kiisaska maqaarka ee iPhone 11 Pro iyo iPhone 11 Pro Max. Xaaladdan oo kale waxaan ku tusaynaa midabka Slate Green
Madaxa Apple Music, ayaa la wareegaya Beats
Oliver Schusser wuxuu noqday madaxa Beats, marka lagu daro inuu sii wado inuu noqdo madaxa Apple Music
Vocolinc Flowerbud, uumi-bixiyaha udgoonka faafin-bixiye HomeKit-ku-habboon
Waxaan ku tijaabinay Vocolinc Flowerbud, qoyaan-bixiye iyo faafin caraf udgoon leh iftiin aan ka xakameyn karno iphone-keena iyo HomePod mahadsanidiisa HomeKit.
Apple waxay daboolka ka qaadaysaa iPhone SE: silikoon € 39 iyo maqaar for 49
Apple waxay daaha ka rogaysaa iPhone SE: silikoon € 39 iyo maqaar for 49. Waxay horeyba uga heli karaan Apple Store sedex midab oo kala duwan.
Sida laga soo xigtay Bloomberg, sameecadaha cusub ee Apple waxay yeelan doonaan qaybo magnetic ah
Apple-ga dhegaha-dhegaha ee soo socda wuxuu lahaan karaa suufka dhegaha la isku beddeli karo ee magnetic-ka ah kaasoo noo oggolaanaya inaan la-shaqeysiinno samaacadaha dhagaha.
Eve waxay ku cusbooneysiisaa barnaamijka iOS-ka qaabab cusub, qaabeyn, iyo isku duubnaan
Codsiga Eve ee lagu maareeyo aaladaha casriga ah ee soo saarahaan, ayaa helay casriyeyn wax ku ool ah oo qurux badan.
Satechi wuxuu bilaabayaa xeedho wireless cusub leh USB-C isku dhafan oo loogu talagalay AirPods
Satechi waxay soo bandhigtay saldhig cusub oo lacag lagu rakibo oo isku dhafan USB-C si toos ah loogu xiro iPad Pro ama MacBook isla markaana looga qaado AirPods.
Scosche MagicGrip, heysata xeedho baabuur otomaatig ah
Haystaha xeedho ee Scosche MagicGrip wuxuu u taagan yahay isku xirkiisa otomaatigga ah, badbaadada, kalsoonida xeedhada iyo tayada dhismaha oo aad u saraysa.
Marshall wuxuu bilaabayaa Uxbridge cusub oo wata naqshaddiisa guridda iyo AirPlay 2
Magaca caanka ah ee ku hadla magaca Marshall wuxuu soo saarey afhayeenkiisa cusub ee Uxbridge smart oo leh Airplay 2 iyo kaaliyaha Amazon ee Alexa.
Apple sidoo kale waxay cusbooneysiineysaa HomePod nooca 13.4
Ka dib cusbooneysiinta dhammaan aaladaha Apple, ragga ka socda Cupertino sidoo kale waxay cusbooneysiiyaan HomePod illaa nooca 13.4.
iBoy, waa cashuurtii uu uqalmay iPod
Classicbot waxay ku soo bandhigeysaa doll cusub Kickstarter, iBoy, oo ku sharfaya iPod-kii asalka ahaa iyadoo aad u faahfaahsan oo aad hadda dalban karto.
Scosche Baselynx, saldhigga kaliya ee lagaa rabo ee aad ugu baahan tahay guriga
Waxaan tijaabinay Scosche Baselynx dekedda lacagta ku siineysa taas oo kuu ogolaaneysa inaad ku sameysato meel kuu gaar ah dhammaan qalabka aad guriga ku haysato.
Xarkaha cusub ee Apple Watch iyo kiisaska iPhone
Apple waxay sii deysaa kiisas kooban oo iPhone ah iyo xargaha Apple Watch.
Powerbeats 4 horeyba waxay uga muuqatay bogga rasmiga ah ee Beats
Sidii la filayay, Powebeats 4 ayaa horeyba looga heli karaa bogga internetka ee Beats, in kastoo aan horay loo sii dalban karin. Qiimahaaga: 149,95 euro
Native Union Key iyo Belt XL, waa laba fiilooyin aad u qaas ah
Waxaan tijaabinay laba fiilooyin oo ah Ururka Native Union: xarig furaha aad had iyo jeer wadato, iyo seddex mitir kale oo dheeri ah si masaafada mashiinku uunan dhibaato u lahayn.
Logitech wuxuu suuqa u galayaa fiilooyinka wireless-ka ee iPhone iyo Apple Watch
Logitech wuxuu sii wadaa inuu ku sharaddeeyo xeedho wireless leh saddex nooc oo cusub.
AirPods Pro 'Aasaasiga' si ay wax soo saar u yeelato Abriil
"Basic" AirPods Pro wuxuu soo saari doonaa wax soo saar bisha Abriil. Sifooyinka ay leeyihiin wali lama yaqaan, laakiin waxay dhawaan bilaabi doonaan inay soo saaraan.
Waxaan ku tijaabinay Kiisaska Qalooca ee loogu talagalay Native Union AirPods
Waxaan tijaabinay kiisaska silikoonka iyo maqaarka ee Ururka Native uu noogu deeqo AirPods iyo AirPods Pro, tayo sare leh iyo qaab aad u taxaddar leh
Nomad waxay cusbooneysiisaa saldhiggeeda lacag bixinta oo noo oggolaaneysa inaan ka qaadno illaa 5 aalado
Nomad dekedda lacag bixinta ee caanka ah, oo ku habboon Apple Watch, ayaa hadda la cusbooneysiiyay si loogu daro laba dekedood oo USB ah oo laga qaado qalab badan.
Vocolinc Smart Outlet iyo Power Strip, fiilooyin casri ah oo loogu talagalay HomeKit
Waxaan dib u eegnay fiilooyinka casriga ah ee Vocolinc ee la jaan qaada HomeKit. Fiilo koronto oo afar saldhig leh iyo hal saldhig oo leh qiime aad u soo jiidasho badan.
Sameecadaha dhagaha ee "Apple" Dhegta Dheeraad ah) waxay ka muuqdaan liiska Target
Telefoonada Dhagaha ee Apple ee soo socda ayaa laga yaabaa inay ka soo muuqdaan markii ugu horreysay Tilmaamaha Bakhaarka Waaxda Target
AirPods Pro Lite ayaa suuqa ku dhici kara bartamaha sanadka
Xanta cusub ee ku saabsan bilaabitaanka suurtagalka ah ee cusub ee AirPods Pro qaab dhaqaale oo leh astaamo yar
Apple waxay isticmaali kartaa tikniyoolajiyadda Gallium Nitride ee xeedho soo socota sanadkan
Apple waxay u isticmaali kartaa tikniyoolajiyadda soo socota ee Gallium Nitride sanadkan. Nidaamkan cabbirka ayaa hoos loo dhigay kala badh oo wuxuu noqon doonaa wax badan
Sida laga soo xigtay Kuo Apple waxay kordhin doontaa wax soo saarka AirTags rubuca labaad iyo saddexaad ee sanadkan
Ilaaliyaha Biyaha Eve, Baaraha Dheecaanka Biyaha ee Iskudhafaya
Waxaan tijaabinay qalabka ilaaliyaha biyaha ee Eve Water Guard, oo la jaan qaadaya HomeKit iyo rakibid aad u fudud oo hufan
Waxaa jira warar xan ah oo ku saabsan "AirPods Pro Lite"
Warbaahinta caanka ah ee reer Taiwan ee DigiTimes ayaa sheegeysa in Apple laga yaabo inay ka fikireyso inay soo saarto AirPods Pro "Lite" sanadkan
Nomad Rugged Case for AirPods Pro, faahfaahinta waa farqiga
Nomad Rugged Case for AirPods Pro wuxuu isku daraa naqshadeynta, agabyada qaaliga ah iyo taxadarka ugu weyn ee dhammaan faahfaahinta.
Samsung waxay soo bandhigeysaa jiilka labaad ee Galaxy Buds + oo leh horumarin muhiim ah
Jiilka labaad ee sameecadaha sameecadaha ee Samsung, Galaxy Buds, ayaa horeyba u rasmi ah wuxuuna noo soo bandhigayaa horumarin xiiso leh xagga codka, baytariga iyo iswaafajinta labadaba
Waxaan ku ogaanay u nuglaanta aaladaha Philips Hue ee u oggolaanaya marin u helka dhammaan shabakadeena
Nalalka Philips Hue waxay leeyihiin nuglaansho u oggolaanaya qof kale saaxiibbadiis inay la wareegaan nalalka, ka soo galaan buundada oo halkaas uga sii socdaan kooxdayada.
Kiiska cusub ee 'Nomad' oo la jaan qaada muraayadaha 'Moment lenses'
Nomad wuxuu soo saaray noocyo cusub oo dabool ah oo la jaan qaadi kara lenska 'Moment lenses', daboolida kuu ogolaanaya inaad ku dhejiso muraayadaha indhaha soo saaraha
Nomad wuxuu bilaabayaa kiiskiisa maqaarka ee AirPods Pro
Nomad wuxuu bilaabay kiiskiisa cusub si uu u ilaaliyo AirPods Pro, oo leh astaamaha astaamaha Horween iyo taabashada badan ee gaarka ah ee guriga.
macruufka 13.3.1 waxaa ku jira sawirro leh Powerbeats4 soo socda
IOS 13.3.1 waxaa ku jira sawirro leh Powerbeats4 ee soo socda. Waxay u ekaan doonaan Powerbeats Pro, laakiin sameecadaha dhagaha leh, sida Powerbeats3, ayaa ku lifaaqan.
Apple waxay diyaarineysaa dhowr soo bandhig qeybta hore ee 2020
Apple waxay bilaabi kartaa xoogaa qalab cusub qeybtii hore ee 2020, oo ay ku jiraan iPhone ka jaban iyo dekedda lacag la'aanta ah.
AirSnap Pro, habka ugu quruxda badan ee loo ilaaliyo AirPods Pro-kaaga
Waxaan tijaabinay kiiska cusub ee Laba iyo Tobnaad ee South AirPods Pro, hab aad u qurux badan oo loo ilaaliyo loona ilaaliyo inay lumaan
Saldhigga Nomad Saldhig Istaag, noloshaada u dhig saldhig toosan
Waxaan u isticmaalnay saldhigyada jiifka ah ee jiifka ah, laakiin kuwa toosan waxay leeyihiin faa'iidooyinkooda weyn, iyo Saldhiggan Saldhigga Nomad Saldhig ayaa ku dhaca jacayl.
Vica Naqshadaynta kiisaska iPhone, adkaysi badan iyo gudaha gufurka
Ka faa'iideyso qiimo dhimista jiilaalka ee ku saabsan daboolkaaga iPhone-ka Naqshadaha Vica. Shirkad Isbaanish ah oo soo saarta qalabka qalabka leh
Asal ahaan iyo nuqul AirPods Pro, ma isku mid baa?
Waxaan tijaabinay nuqul ka mid ah AirPods Pro oo balanqaadaya inuu lamid noqon doono kuwii asalka ahaa, waxaanna waji ka waji u galnay AirPods Pro dhab ah, miyay u qalmaan?
Satechi Dual Smart Outlet, oo ah HomeKit marin laba dhinac u dhigma
Waxaan tijaabinay Satechi laba god oo ku habboon HomeKit kaas oo kuu oggolaanaya inaad si madaxbanaan ugu maamusho adoo adeegsanaya Siri iyo iPhone-kaaga.
Apple AirPods Waxay Helaan 71% Dakhliga Suuqa Dhegaha ee Wireless-ka
Apple AirPods looma iibin kaliya sida hotcakes, laakiin sidoo kale waxay abuuraan 71% dakhliga ka soo gala nooca dhegaha ee wireless-ka.
Nomad wuxuu soo bandhigayaa saldhigiisa cusub ee saldhigga saldhigga
Nomad wuxuu bilaabayaa saldhig cusub oo lagu dalaco oo ah saldhigga 'BAse Station Stand' kaasoo u oggolaanaya dib-u-soo-buuxinta iPhone-ka iyo AirPods-ka oo leh naqshad taagan
BaseLynx waa saldhigga lacag-bixinta ee cusub ee shirkadda soo saaraha Scosche
Saldhigga cusub ee Sosche ee lacag bixinta ayaa hadda la heli karaa
Satechi wuxuu soo bandhigayaa xeedho cusub oo 108W USB-C ah
Satechi wuxuu ku soo bandhigayaa xeedho cusub CES-ta Las Vegas oo awood u leh inay ku dallacaan MacBook, iPhone, iPad iyo qalab kale oo isku mar ah
Satechi wuxuu soo bandhigayaa saldhig seddex laab ah oo loogu talagalay iPhone, Apple Watch iyo AirPods
Satechi wuxuu ku soo bandhigay qaab dhismeedka CES 2020 ee Las Vegas, saldhig sedex laab ah oo noo ogolaanaya inaan si wada jir ah uga qaadno Apple Watch, AirPods iyo iPhone.
Insta360 ONE R cusub ayaa timid, kaamirada ficilka cusub oo leh 360 duubis
Insta360 ONE R cusub ayaa halkan jooga, kaamirada cusub ee waxqabadka qaabdhismeedka ah oo leh 3 kamaradood oo isla jidhku kujiro: kamarad 360 ah, kamarad 4K ah, iyo mid leh dareemayaal 1-inji ah,
Sonos waxay ku dacweysaa Google adeegsiga shatiyada iyadoon la soo marin sanduuqa
Shirkada sameeyaha sameecada sameeya ee Smart Sonos ayaa gudbisay dacwad ka dhan ah shirkada Google, iyada oo ku eedeysay inay isticmaaleyso shatiyadeeda iyadoon heshiis hore laga gaarin
ShiftCam waa kiis badan oo lens ah oo loogu talagalay iPhone
Shiftcam wuxuu ku siinayaa ikhtiyaarka isticmaalka illaa afar muraayadaha indhaha ah oo dheeri ah oo ku saabsan iPhone 11 si aad u qaadatid kuwa sawirada aad u kala duwan
Belkin wuxuu Ces ku soo bandhigayaa 3-in-1 Charging Dock
CES ee Las Vegas ayaa socda oo mid ka mid ah kuwa aan inta badan ku guuldareysan waxyaabaha cusub waa Belkin. Xaaladdan oo kale waxay soo bandhigeysaa 3 1 XNUMX xeedho
Waxaan tijaabinay 'Xtorm' EDGE oo ku shubaneysa HUB
Waxaan kuu keenaynaa xalka saxda ah ee dhammaan dhibaatooyinkaaga lacag-bixinta ee ah 'Xtorm HUB' oo leh xawaareyn degdeg ah iyo USBC PD illaa 60W.
Nanoleaf wuxuu bilaabayaa nalalka cusub ee mashiinka lagu barto kuna habboon HomeKit
Ragga ku jira Nanoleaf waxay bilaabeen nalalka cusub ee la jaan qaadi kara HomeKit ee markan ku daraya shaqooyinka barashada mashiinka si ay u bartaan caadooyinkeena.
Xorriyadda ZENS: saldhig lacag-bixin oo la mid ah AirPower oo aan waligeen arag
Saldhigga lacag la'aanta wireless-ka ee ZENS Liberty 16-coil wuxuu bilaabmayaa in la iibiyo. Iyada oo leh laba dhammeystir kala duwan waxay iska dhigeysaa inay tahay AirPower aan waligeed la suuq geyn
Kohler Wuxuu Daahfuray Qubeys Qubeys Casri Ah Oo Alexa-Ku Jaanqaadi Kara
Dadku waxay Kohler ka qaataan adduunka walxaha ku xiran talaabo dheeraad ah iyagoo wata qubeys cusub oo qubeys leh oo Alexa-karti leh.
Otterbox EXO EDGE iyo Symmetry, ilaali iPhone-kaaga iyo Apple Watch
Waxaan dib u eegnay laba kiis oo Otterbox ah oo loogu talagalay iPhone iyo Apple Watch kuwaas oo ka ilaaliya kuuskuusyada iyo dhibcaha si ay ugu ekaadaan kuwo aan fiicnayn.
Ubiquiti waxay soosaaraysaa xirmo ay kujiraan AmpliFi ALIEN Router iyo soo celiyaha
Ubiquity waxay na siisaa xirmo ay ka mid yihiin routerka AmpliFi Alien iyo ku celceliyaha si loogu qeybiyo shabakadeena inta lagu guda jiro gurigeenna iyadoon wax xawaare ah iyo dhibaato la qabin.
Waxaan hadda ka iibsan karnaa Sonos One SL iyo kiisaska AirPods Pro ee ku jira Apple Store khadka tooska ah
Diiwaanka laga heli karo Apple Store ayaa lagu balaariyay Sonos One SL cusub iyo laba kiis oo cusub oo loogu talagalay AirPods Pro
Anker wuxuu soo bandhigayaa Flash Flash markii hore la xaqiijiyay ee iPhone 11
Anker wuxuu soo bandhigayaa shaashaddii ugu horreysay ee laydh LED ah ee loogu talagalay iPhone 11 iyo iPhone 11 Pro. Waxay buuxisaa xeerarka Apple ee MFI. Waxaa laga heli karaa laga bilaabo Janaayo.
Apple waxay iibin kartaa 85 milyan oo AirPods ah sanadka 2020
Tan iyo markii ay ka bilaabatay suuqa bishii Diseembar 2016, AirPods kaliya ma noqonin tixraac gudaha ...
AirPods Pro wuxuu hagaajiyaa daahitaanka qaabkii hore
AirPods Pro-ka cusub wuxuu ka daaha fiicanyahay jiilka labaad ee AirPods aadna wuu uga fiicanyahay jiilkii koowaad.
Ekster, jeebka waligaa ma waayi doontid
Waxaan tijaabinay baarlamaanka Ekster, boorso maqaar dabiici ah oo dabiici ah oo kujirta tiknoolajiyada ugu dambeysa ee ilaalinta RFID iyo nidaamka raadraaca
5ta hadiyadood ee ugufiican ee la siiyo taageere Apple ah
Haddii aadan aqoon waxa la siinayo Kirismaskan, waxaa halkan ku yaal 5 hadiyado ku habboon oo loogu talagalay taageere kasta oo Apple ah. Xaq baad u noqon doontaa hubaal!
Kuwani waa kiisaska cusub ee OtterBox ee loogu talagalay iPhone 11
OtterBox iyo PopSockets waxay bilaabeen dacwad murugo leh oo la jaan qaadi karta iPhone 11 cusub isla markaana lagu heli karo 4 midab oo layaableh.
AirPods waxay gaari laheyd $ 4 bilyan, oo ka sarreysa xogta iibka ugu wanaagsan ee iPods
Apple wuxuu dhaafi lahaa meesha ugu sarreysa ee iibinta iPod-yada cusub ee AirPods kaas oo gacan ka geysan lahaa ilaa 4 bilyan oo doolar astaanta.
Kiisaska ESR ee loogu talagalay AirPods Pro: ilaalinta adiga oo aan dareemin
Hadday tahay sababo qurxin, inaad midab beddesho, ama ilaalin, inaad dabool saarto qalabkaaga AirPods Pro waxay noqon kartaa fikrad wanaagsan.
Classicbot wuxuu noo siiyaa laba dhagax jawharad kasta oo Apple taageere u ah
Classicbot wuxuu abuuray laba alaabood oo yaryar oo taageere kasta oo Apple ah uu jeclaan doono, oo ah nuqullo ka mid ah laba nooc oo caan ah sida Macintosh iyo iMac G3
Apple waxay diyaarinaysaa sameecado cusub oo Powerbeats4 ah oo ay la socoto taageerada "Hey Siri"
Apple waxay ka fikireysaa inay balaadhiso baaxada dhagaha dhagaha ee Beats iyadoo soo saareysa Powerbeats4 cusub oo keenta hawsha "Hey Siri".
Mid ka mid ah labada AirPod ee aan shaqeynin? Isdeji, waxay leedahay xal
Mid ka mid ah labada AirPod ee aan shaqeynin? Ha welwelin, waxay leedahay xal. Mararka qaarkood way dhacdaa. Xidhiidhka wireless wuxuu leeyahay halisahiisa.
Twinkly, nalalka casriga ah ayaa u imanaya geedkaaga kirismaska
Twinkly waxay na siisaa xirmooyinka nalalka kala duwan ee geedka kirismaska ​​oo leh nidaam qaabeyn aad u fudud iyo natiijooyin cajiib ah.
Falanqeeyayaashu waxay soo jeedinayaan in Apple ay iibin lahayd ilaa 3 milyan oo AirPods ah intii lagu jiray Jimcaha Madow
Toddobaadkii uu Black Friday socday ayaa u oggolaatay shirkadda fadhigeedu yahay Cupertino inay geliso in ka badan 3 milyan oo AirPods wareejin ah.
AirPods waxay keeneysaa faa iidada ugu fiican alaab-qeybiyeyaasha Aasiya ee Apple
Apple wuxuu noqon lahaa macaamilka ugu fiican ee alaab-qeybiyeyaasha AirPods ee Aasiya sababo la xiriira mugga ganacsi ee badan ee ay AirPods siinayaan
Falanqaynta Kiiska cusub ee Battery Smart-ka ee loogu talagalay iPhone 11 Pro Max
Waxaan falanqeyneynaa Kiiska Battery-ga Smart-ka ee loogu talagalay iPhone 11 Pro Max, oo leh 50% madax-bannaanida iPhone-kaaga iyo badhanka kamaradda.
Iibso iPhone oo ha la yimaado AirPods
DigiTimes waxay sheeganeysaa Apple inay ku dari karto AirPods weheliso iPhones sanadka soo socda. Xanta soo noqnoqota ee aan rajeyneyno in hal sano la fulin doono
Tabaha ugu wanaagsan ee loogu talagalay AirPods Pro
Waxaan ku tusineynaa wax kasta oo aad ku sameyn kartid AirPods Pro-kaaga, markaa waad ka faa'iideysan kartaa dhammaan howlaha dhagaha dhagaha ee cajiibka ah.
Heshiisyada ugu fiican ee ku saabsan qalabka loogu talagalay Black Friday
Waxaan ku xulannaa heshiisyada ugu wanaagsan Jimcaha Madoow ee ku saabsan alaabada iyo alaabada la xiriirta iPhone, iPad iyo Mac, markaa ha waalan inaad raadiso
UAG Madani ah, sifeyn ballaaran, ilaalinta ugu badan ee iPhone-kaaga
Kiisaska cusub ee madaniga ah ee ka socda Urban Armor Gear ayaa bixiya ilaalin heer milatari ah oo loogu talagalay iPhone-kaaga, oo leh naqshad aad ufiican
AirFly Pro, markaa waxaad ku isticmaali kartaa AirPods qalab kasta
Aaladda AirFly Pro waxaad ku isticmaali kartaa illaa laba nooc oo sameecadaha dhegaha ee Bluetooth oo leh qalab kasta oo leh maqal maqal ah
Saadaasha Bloomberg ee shixnadaha AirPods ayaa sii kordheysa
Iibinta AirPods sida ku cad Bloomberg waxay gaarayaan tirooyin muhiim u ah Apple. Sidoo kale waa suuragal in kuwani ay sii kordhayaan
Waxaan tijaabinay qufulka caqliga ee Nuki, oo la jaan qaadaya HomeKit, Alexa iyo Google Assistant, oo leh rakibid aad u fudud oo aan bedelin qufulka asalka ah
AirFly Pro, oo ah jiilka labaad ee AirFly ee ay soo saartay Twelve South sanadkii hore, ayaa hada laga heli karaa Apple Stores daafaha dunida.
Mujjo waxay cusbooneysiineysaa galoofyada isboortiga si ay ugu darsato difaac dheeri ah qabowga, iyadoo ilaalineysa sifooyinkooda taabashada.
Kiisaska Ka Hortagga Saameynta Hantidhowrka waa mid ka mid ah kiisaska bixiya difaac weyn oo leh isbeddel yar oo ku yimaada naqshadeynta iPhone
Sonos horeyba waxay kuu ogolaaneysaa inaad ku rakibto Kaaliyaha Google Sonos One, Beam iyo Move ku hadla, si aad ugu isticmaasho Kaaliyaha Google ee Isbaanishka.
Waxaan tijaabinay Tile Pro iyo Sticker-ka cusub, oo ah laba badal si aanad waligood u waayin waxaad aad ugu baahan tahay ee aad marwalba u iloowdid.
Waxaan ku tijaabinay kiisaska maqaarka ee Mujjo moodooyinka cusub ee iPhone, bedelka ugu fiican ee kiisaska rasmiga ah ee Apple
Iyadoo wajahayno bilawga dhow ee Apple AirTags, waxaan hadda ognahay sida habka qaabeynta AirTags ay u mari doonto iPhone-keena.
Burburka barnaamijka cusub ee AirPods Pro ee ay soo saartay shirkadda 'iFixit' ayaa muujineysa wixii aan horey u ogayn ee ah in aan la dayactiri karin haddii ay dhibaatooyin dhacaan.
AirPods, oo ah kan ugu iibka badan Apple sannadihii la soo dhaafay, wuxuu la soo baxay tartan adag, laakiin ...
Hadda waxaad heli kartaa AirPods Pro cusub, sameecado dhegaha furan oo cusub oo hadda keenaya IPX4 nooca iska caabinta biyaha.
Muxuu noqon karaa magaca aaladda aaladda Apple ee la ogaado: AirTag, oo waliba leh batteri la beddeli karo.
Kuwani waa qiimaha ay Apple ka qaadi doonto beddelka mid ka mid ah kuwan cusub ee AirPods Pro haddii ay lumiso ama ku guuldareysato dammaanad.
Maalin kasta - New AirPods Pro, iOS 13.2 iyo HomePod
Astaamaha ugu muhiimsan ee AirPods Pro cusub iyo shaqooyinka cusub ee keena cusbooneysiinta iOS 13.2, iPadOS 13.2 iyo HomePod.
AirPods Pro-ka cusub wuxuu ku imaan karaa ilaa 8 midab oo kala duwan, oo ay ku jiraan afarta midab ee hadda jira iPhone 11 Pro
Sawirro cusub oo ku saabsan waxa sanduuqa weelka jiilka saddexaad ee AirPods noqon doono oo leh nidaam baajinta dhawaaqa firfircoon.
UAG Monarch wuxuu isku daraa birta, maqaarka iyo balaastigga oo leh dhammeystir heerka koowaad ah, iyadoo lagu gaarayo difaac aad u sareeya iPhone-kaaga.
Waxaan ku tijaabinay buuga BookBook-ka iPhone 11 Pro Max, kiis boorsada tayo sare leh oo ka samaysan maqaar isla markaana aad u tiro badan oo ka ilaaliya qalabkaaga.
Eve Energy Strip, oo ah xarig casri ah oo kala duwan
Waxaan tijaabinay qalabka 'Eve Energy Strip smart smart', oo leh nashqad qaali ah, isku-dhafka HomeKit iyo dhammaan tallaabooyinka ilaalinta qalabkaaga.
Daabacaadda warbaahinta Shiinaha waxay hubineysaa in AirPods Pro cusub uu imaan karo bishaan Oktoobar iyadoo la joojinayo buuqa.
Waxaan ku tijaabinay Anker's Soundcore Flare + kuhadalka Bluetooth, oo leh ismaamul weyn, nalalka LEd, iyo awood la yaab leh iyo baas.
Waxaan tijaabinay Sonos Move cusub, kan ugu hadalka badan suuqa oo isku daraya tayada codka iyo qaadista, kalkaaliyeyaasha dalwaddii, WiFi iyo Bluetooth.
Waxaan tijaabinay Kiiska Nomad Rugged Case iyo Kiisaska maqaarka ee Firfircoon ee Rugged, oo na siiya difaac weyn oo leh naqshad qiimo leh
Nomad waxay ku dhawaaqday saldhig lacag bixin ah oo kuu ogolaanaya inaad isticmaasho dusha oo dhan si aad dib ugu cusbooneysiiso qalabka, sida Apple ugu ballanqaaday AirPower.
Nomad USB-C Fiilooyinka, Nolosha
Waxaan dib u eegnay fiilooyinka Nomad USB-C, oo leh daboolka Kevlar iyo dammaanad 5 sano ah, oo lagu daray shahaadada Apple.
Dusha EarBuds, beddelka cusub ee Microsoft ee AirPods
Ballanqaadka Microsoft ee headphones wireless waxaa loo yaqaan 'Surface EarBuds' waxayna na siisaa naqshad gebi ahaanba ka duwan tan soo saarayaasha badankood ay raacaan.
Nanoleaf Canvas, qurxinta iyo adeegga guud ee isla eg
Waxaan tijaabinay mid ka mid ah waxyaabaha ugu yaabka badan ee loo yaqaan 'HomeKit', oo ah shey qurxin leh oo faa iidadiisa ficilku ay tarmayso
Haddii aad rabto inaad ka faa'iideysato amarka degdegga ah ee iPhone-ka, soo hel shaashadan 5 Aukey oo leh dhowr dekedo oo USB ah iyo Dynamic Detect
IOS 13.1 code wuxuu muujinayaa Kiiska Battery Smart ee iPhone 11, Pro iyo Max
Apple-ka waxay ku diyaarin karaan kiisaska batteriga cusub Smart Battery Case ee iPhone 11, iPhone 11 Pro iyo iPhone 11 Pro Max
Kiisaska ugu fiican dhammaan noocyada iPhone 11
Waxaan u dooranay daboolida ugufiican magacaaga cusub ee iPhone 11, Pro iyo Pro Max, si aan ugu ilaalino dhadhanka wanaagsan.
Sida laga soo xigtay DigiTimes, AirPod-yada cusub ma soo saari doonaan wax soo saar illaa iyo bisha Oktoobar ee soo socota, sidaa darteed mabda 'ahaan waan iska tuureynaa soo bandhigistooda maanta
IPhone-ka cusub ee 2019-ka ayaa kor u qaadi doona qalab cusub oo R1 sensor ah oo loo yaqaan "Rose" si uu u maareeyo xogta dhammaan dareemayaasha dhaqdhaqaaqa iyo meelaha bannaan.
Fresh'n Rebel waxay soo bandhigeysaa dhagaha dhagaha ee mataanaha ah ee runta ah si ay ugu wajahdo AirPods, midab badan iyo qiimo aad u tartan badan.
Eve waxay soo bandhigtay qalabkeeda cusub ee HomeKit oo isbadal caqli gal ah u leh nidaamyada Yurub iyo qalab cusub oo lagu ogaanayo daadinta biyaha.
Sonos wuxuu soo bandhigayaa Sonos Move cusub, si loogu raaxeysto codka ka baxsan guriga
Sonos waxay soo bandhigeysaa afhayeenkeedii ugu horeeyay ee la qaadi karo laakiin leh dhamaan tayada Sonos, iyo sidoo kale Sonos One SL cusub iyo Sonos Port cusub
Gacan dahab ah oo Apple Card ah oo loogu talo galay milyaneerada
Dacwad ku saabsan Apple Card oo ka sameysan dahab oo qiimihiisu yahay kun Euro
Ragga jooga Xiaomi waxay la kulmaan baahida waxayna ka dhigaan naladooda casriga ah ee Yeelight inay la jaan qaadaan APple's HomeKit.
Insta360 waxay soo saareysaa 'Go' cusub, kamaradda ugu yar ee wax xasilisa suuqa
Sumadda caanka ah ee kamaradda 360 ee Insta360 ayaa soo saaraysa kamaradda cusub ee Insta360 GO, kamarad culeyskeedu yahay 18.3 garaam oo keliya, cabirkeeduna yahay far.
Xayeysiiska Apple ee bogga Kuuriya wuxuu na tusayaa dhammaan qaababka loo ilaaliyo sanduuqa AirPods-keena
Shirkadda Nike ayaa hadda soo bandhigtay Nike Adapt Huarache cusub. Nike-kani waa la adkeyn karaa ama si toos ah ayaa looga fasixi karaa kaaliyaha Siri
AirPods ma helaan talobixinta Warbixinta Macaamiisha, waa wax ay sameeyaan Galaxy Buds
Sida laga soo xigtay Warbixinnada Macaamiisha, jiilka 2-aad ee Apple AirPdos waxaa aad uga tiro badan Samsung Galaxy Buds oo ay ku guul darreysatay inay gaarto shahaado.
Dib u eegista hadalka SYMFONISK ee IKEA iyo Sonos
Waxaan tijaabinay dadka ku hadla SYMFONISK cusub, natiijada iskaashiga u dhexeeya IKEA iyo Sonos, waxayna ku bixiyaan dhawaq aad u wanaagsan qiimo aad u jaban.
Soo saaraha kiisaska difaaca ee iPhone-ka, ayaa hadda soo bandhigay saldhig cusub oo aad u dhuuban oo xaddidan oo lacag la'aan ah.
Laba iyo tobanka koonfureed waa shirkad u heellan qalab tayo leh, guud ahaan ka samaysan maqaar, alaabtayada ...
Apple horeyba waxay noo ogolaatay inaan ku iibsano Poiwerbeats Pro cusub ee Ivory, Moss iyo Navy Blue, oo aan kaliya ku aheyn madow sidii ay ahaayeen tan iyo markii la bilaabay.
Soo ogow waqtiga kooban ee ku saabsan qalabka otomaatiga guriga laga helo Koogeek: fiilooyin caqli badan, fiilooyinka LED-ka, xargaha korontada, dareemayaal iyo waxyaabo kale oo dheeri ah!
Kiis sameeyayaashu waxay filayaan qalin Yar oo Apple ah oo loogu talagalay iPhones soo socda 11
Warbixin kale waxay xaqiijineysaa in iPhone 11 ay ku jiri doonto fiilada USB-C sanduuqa, xeedho dhakhso leh oo beddeleysa 5W dhaqameed.
IKEA waxay isu diyaarineysaa inay ku dhufato maalgelinta aaladaha 'HomeKit'
Ragga ku jira IKEA way iska cadahay: suuqa aaladaha casriga ah ee casriga ahi wuu kobcayaa, waxayna doonayaan inay sii wadaan maalgashiga HomeKit ...
DJI ayaa hada daahfurtay DJI Osmo Mobile 3 cusub, oo ah xasiliyaha cusub ee isku laaban kaas oo aanan kugula talinayn inaad iibsato.
Sonos waxay isu diyaarineysaa inay soo bandhigto afkeeda ugu horreeya ee caqli-galka ah ee la qaadan karo oo leh Bluetooth iyo AirPlay 2 Wi-Fi toddobaadyada soo socda.
Apple wuxuu bilaabaa iibinta Mophie qalab badan oo mashiinka lagu buuxiyo, oo si cad u waxyooday guusha Nomad guulaha
Apple wuxuu soosaarayaa adabtarada cusub ee loo yaqaan 'USB-C multiport adapter' HDMI
Ragga ka socda Cupertino waxay bilaabeen nooc cusub oo ah adabtarada 'AV' oo wata HDMI si ay u keenaan taageerada HDR10 iyo Dolby Vision.
Apple waxay hawlgelisay nidaam ku jira IOS si "loogu taliyo" adeegsadaha inuu isticmaalo baytariyada asalka ah markii aad go'aansato inaad beddesho ...
Withings waxay soosaartay kormeerayaal cusub oo cadaadis dhiig oo kuxiran iphone, mid kamid ah oo leh astaamo koronto iyo stethoscope dhijitaal ah
Netro Whisperer, waa shidma ku habboon daryeelka beertaada
Netro Whisperer waa heerkulka, huurka iyo dareeraha iftiinka qoraxda kaas oo ka caawin doona xaruntaada waraabinta Netro Sprite inay xitaa noqoto mid aad u tayo badan.
Eve kordhiyo, balaadhinta gaadhista qalabkaaga Eve HomeKit
Eve waxay bilowday Eve Extend, buundo loogu talagalay qalabka Eve oo u oggolaanaya iyaga in laga fogeeyo xarunta isku xidhka HomeKit iyada oo ay ugu wacan tahay isku xirnaanta WiFi.
IPhone-yada soo socda ayaa taageero u yeelan kara qalinka Apple
Dhowr la taliyeyaal ayaa soo jeedinaya in qalinka Apple uu la jaan qaadi doono iPhones-ka 2019 ee ay Apple soo bandhigi doonto bisha Sebtember.
Satechi waxay soo saartay jiir ka samaysan aluminium, oo leh naqshad aad u fiican, cabir ku habboon in lagu qaado meel kasta iyo batteri dib loo buuxin karo oo loo maro USB-C
IOS 13 iyo iPadOS waxaad ku isticmaali kartaa kantaroolayaasha PS4 iyo Xbox One taleefankaaga iPhone, iPad iyo Apple TV kulamada la jaan qaadaya ilaaliyayaasha MFI
FamilyCharger waa hal xeedho oo keliya shan qalab oo isku mar ah
Qalabka Shaybaarka ayaa lahaa fikrad aad u fiican oo bilaabay inuu suuq geeyo xeedho awood leh oo leh fiilo awood u leh inay ku soo rogto lix qalab isla waqti isku mid ah.
Heshiisyada HomeKit ee ugufiican maalinta Amazon Prime Day
Waxaan kaa dhigaynaa xulkii ugu wanaagsanaa ee alaabooyinka la jaan qaadi kara HomeKit ee la iibin doono inta lagu jiro Maalinta Ra'iisul Wasaaraha ee Amazon maanta
Waxaan doorannaa heshiisyada ugu wanaagsan ee Amazon Prime Day ee ku saabsan alaabada Apple, qalabka iyo noocyada kale ee tikniyoolajiyadda guud ahaan
Amazon waxay dooneysaa inay soo saarto afhayeen leh cod ku filan si uu ula tartamo Apple's HomePod iyo Sonos ku hadla
Apple Powerbeats Pro cusub oo wata H1 chip hadda waxaa laga iibsan karaa Spain, oo loogu talagalay isboortiga iyo kiishad wax lagu xiro.
tadoº Smart AC Control, ugu dambeyntiina ku xakamee qaboojiyaha HomeKit
Xakamaynta hawo-qaboojinta ee loo maro HomeKit ama madal kale oo otomatig ah oo guriga lagu adeegsado ayaa hadda lagu heli karaa tadoº Smart AC Control V3 +
Ikea waxay cusbooneysiineysaa noocyada nalalka casriga ah, mid ka mid ah kuwa ugu raqiisan suuqa, TRADFRI oo la jaan qaada AppleK HomeKit.
Ragga Eve waxay u diyaar garoobeen sidii ay u bilaabi lahaayeen qalabka wax lagu dhejiyo ee 'Bluetooth' qalabkooda ku habboon Apple HomeKit.
Elago's Apple Watch Charging Stand oo ku jira Qaabka iPod-ka ayaa si fudud u qurux badan
Marka Apple Watch yimaado, waxay nagu qaadataa wakhti yar si aan u ogaanno inaan si macquul ah u qasbanaaneyno inaan helno ...
Legrand waxay soo bandhigeysaa noocyo kala duwan oo furayaal ah oo loogu talagalay HomeKit iyadoon loo baahneyn xarun
Ragga Legrand waxay raacaan raadadka Philips iyagoo bilaabaya furayaal cusub oo la jaan qaadi kara HomeKit oo aan u baahnayn Hub si ay ula falgalaan.
Philips Hue wuxuu bilaabayaa nalalka casriga ah ee uguhoreeyay Bluetooth, uma baahna buundada
Philips Hue wuxuu ku bilaabay nalalka ugu horeeya Bluetooth si aan u ilawno buundooyinka oo aan uga koontarooli karno aaladahayaga.
Kiisaska batari ee cusub ee Mophie oo leh xiriir danab iyo xukun wireless ah
Mophie wuxuu soo saaray batteri cusub iyo kiisaska lacag la'aanta ah ee fiilooyinka la xiriira danab la jaan qaada iPhone XS, iPhone XS Max iyo iPhone XR
Waxaan tijaabinay kamaradda cusub ee amniga gudaha ee gudaha, oo leh nidaam sirdoon farsamo oo ka hortagi doona digniinta beenta ah.
Laba iyo tobanka koonfureed waxay na siisaa xeedho cusub oo HiRise Wireless ah oo isku darsata faa'iidooyinka xeedho-dejiyeha miisaanka leh oo leh mid jiifsan oo la qaadan karo
Mophie Powestation Hub wuxuu noo ogolaanayaa inaan wada qaadno afar qalab
Mophie Powerstation Hub wuxuu noo ogolaanayaa inaan ku soo dallacno illaa afar qalab oo isku wada jir ah hal aalad.
Just Mobile waxay na siisaa saldhiga lacag bixinta ee Alubase oo leh naqshad isku dhafan oo si fiican ula socota alaabadaada Apple, iyo tayada ugu sareysa
Netro Sprite, kontoroole waraabe caqli badan
Netro Sprite waa xakameeye waraab caqli badan, oo leh xulashooyin badan oo qaabeyn ah oo kuu ogolaanaya inaad heysato beertadaada kaamil ah iyo sidoo kale inaad keydiso biyaha.
Kani waa HomeKit iyo barnaamijka Guriga ee iOS 13
Waxaan ku tijaabinay HomeKit iyo barnaamijka Guriga ee iOS 13 isbadalada ay Apple ku soo kordhisay qaybtaan cusub ee loogu talagalay iPhone.
La xaqiijiyay: Ikea's HomeKit-ku-habboonaanta indhoolayaasha caqli-galku waxay yimaadaan Ogosto
KADRILJ iyo FYRTUR indhooleyaal caqli-gal ah oo la jaan qaadaya HomeKit oo ka socda Ikea ayaa la xaqiijiyay inay suuqa soo galaan bisha Ogosto ee soo socota.
Ka faa'iideyso lacag-siinta degdegga ah ee ku-xirmooyinka USB-C ee ka socda Hama
Hama waxay na siisaa laba xeedho oo USB-C ah oo loogu talagalay iPhone oo leh ilaa 18W oo awood u leh godadka gidaarka iyo gaadhiga
Mophie wuxuu soo saaray noocyo kala duwan oo powebanks ah oo loogu talagalay iPhone iyo iPad
Soo saaraha powerbanks Mophie ayaa hada soo kordhiyay noocyada cusub ee 'Powerstation' oo wata naqshado, midabyo iyo awoodo cusub.
Powerbeats Pro waxaa horay loo sii dalban karaa laga bilaabo 31-ka Maajo ee Boqortooyada Ingiriiska, Faransiiska iyo Jarmalka
Powerbeats Pro-da cusub wuxuu imaan doonaa Yurub 31-ka May, inkasta oo uu kaliya imaan doono Boqortooyada Ingiriiska, Faransiiska iyo Jarmalka. Waxay imaan doonaan Spain bisha Juun.
Waxaan falanqeyneynaa kamaradaha ilaalada ee Ezviz CTQ6C
Waxaan falanqeyneynaa kaameerada ilaalada ee Ezviz CTQ6C, kaamiro qiimaheeda ka badan yahay mid lagu hagaajiyay tirada badan ee astaamaha ay na siiso.
Tado waxay cusbooneysiisaa Remote-ka Qaboojiyaha Caan ka ah oo leh Iswaafajinta HomeKit
Ragga ku jira Tado waxay bilaabeen cusbooneysiin ku saabsan HVAC Control-kooda ee qaboojiyaha, V3 oo asal ahaan noo keena HomeKit.
Sonos wuxuu ku darsadaa Kaaliyaha Google kuwa ku hadla ee jooga Mareykanka
Sonos waxay Google Assistan ku dartay liiska caawiyeyaasha dalwaddii ee la jaan qaadi kara kuwa ku hadla, oo hadda kaliya ku sugan Mareykanka
Ring Doorbell Pro iyo Waxyaalaha Tooska ah ee 'Cam Cam' Waxay Noqon Doontaa Isku-Xidhmo HomeKit Sannado Ka Dib Balanqaadyo Ka Dib
Laba ka mid ah waxyaabaha ugu caansan ee Ring, Doorbell iyo Spotlight Cam, ayaa dhawaan heli doona cusbooneysiin iyaga ka dhigaya inay ku habboon yihiin HomeKit.
Daboolida badanaa ma fashilmaan kiiskan waxay na tusayaan naqshadda iPhone-ka soo socda
Soosaarayaasha qalabka waxay u muuqdaan inay qorsheynayaan aaladaha waqti ka hor tanina waxay ka dhigeysaa daadinta naqshadeynta inay soo noqnoqoto.
Powerbeats Pro waxay leedahay IPX4 caabbinta biyaha
Apple waxay diiradda saartay noocyada kala duwan ee Powerbeats ee adduunka isboortiga, waxayna u qaadatay muujinta ugu sareysa ee leh ...
Kiis sameeyaha UAG wuxuu bilaabayaa labadiisa uguhoreysa Apple Watch
Soo saaraha kiisaska iPhone iyo iPad ayaa si rasmi ah u soo bandhigay waxa ay noqon doonaan labadiisa xarig ee ugu horreeya Apple Watch